Jaaliyadda Soomaalida ee magaaladda Jiddah oo soo dhoweeyay Madaxweynihii hore Shariif | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Jaaliyadda Soomaalida ee magaaladda Jiddah oo...
Jaaliyadda Soomaalida ee magaaladda Jiddah oo soo dhoweeyay Madaxweynihii hore Shariif
WARARKA CAALAMKA	0
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo dhoweynayay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kana ka qeyb galeen Culumaa’udiin, aqoonyahano, waxgarad, aqoonyahano iyo marti sharaf ayaa xalay ka dhacday magaalada Jiddah ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Xaflada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jiddah, waxaana ugu horeyn ka hadlay Xildhibaan hore C/llaahi Raagge Xuseen oo ku dheeraaday waxqabadka Madaxweynihii hore Shariif, isagoo ku amaanay dadaalkii iyo dulqaadkii oo u soo galay sidii looga bixi lahaa KMG iyo dagaalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
“Waxaan ognahay in Qaranimo la keeno aanay fududeen, waxaan ognahay in aad habeen badan u dhaxday meel aadan seexan laheyn, waxaan laguugu caay laheyn waad u adkeysatay, in la helo qarannimadii Soomaaliyeed oo dalka laga saaro KMG, waan ognahay inta aad u martay, waana u sheegeynaa Ummadda Soomaaliyeed”Xildhibaan hore C/llaahi Raagge Xuseen.
Xildhibaan Xuseen Khaliif Jaamac ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu ku soo dhpweeyo isaga iyo dhamaan bulshada ku nool dalka Sauudiga Madaxweynihii hore ee Soomaliya Shariif Sheekh Axmed magaalada Jiddah ee dalka Sacuudi Carabiya.
Sidoo kale Ugaas Maxamed Faarax oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qeyb galay munaasabada ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay in Madaxweynihii hore ee Soomaliya Sheekh Shariif mar labaad ku soo laabto jagada Madaxtinimada Soomaaliya, isagoo sheegay inuu mudan yahay in mar labaad uu hogaamiyo ummada Soomaaliyeed ,maadaama uu horey wax wanaagsan ugu qabtay ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo gaba gabadii munaasabada ka hadlay ayaa ka mahad celiyay soo dhoweynta ay u sameeyeen Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sacuudiga, waxaana uu uga warbixiyay booqashada uu ku joogo dalka Sacuudiga inay tahay martiqaad oo ka helay Bangiga Horumarinta Islaamka.
“Meeshaan waxaan u nimid waxay aheyd casuumaad aan ka helnay Madaxweynaha Bangiga horumarinta Islaamka iyo in aan cumreysano alxamdulilaah labadiiba si wanaagsan ayay ku soo dhamaadeen Allaha naga aqbalo Cumradii iyo dhamaan cibaadada kale”ayuu yiri Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale waxaa uu ku dheeraaday ka hadalka markii uu xafiiska ka tagay kadib, isagoo xusay inuu ka shaqeynayay inta badan dib u hishiisiinta, waxbarashada, iyo caafimaadka, waxaana uu tilmaamay in sababta ku kaliftay ay tahay labo arrimood,midda koowaad waxaan muhiim u arkay in dadka Soomaaliyeed in hoos laga soo dhiso.
“Ummad walaala ah muslim ah ehel ah wax kal gaareen, wixii ka dhaxeeyay dumeen marka la rabo inay wax wada yeeshaan, waxay u baahan tahay inay helaan gogol nabadeed oo wixii calooshooda ku jira banaan ku soo dhigaan kadibna wax ku heshiiyaan taasna waxay abuureysaa kalsooni iyo is dhex galka ummadda Soomalaiyeed”